Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: September 2011
မြန်မာပြည်စတင်ပြောင်းလဲနေပြီလို.ပြောနေသူများကို Global Justice Center ကစိမ်ခေါ်လိုက်ပြီ
မကြာခင်က အိုင်စီဂျီခေါ်အပြည်ပြည်ဆိုင်အကျပ်အတည်းအဖွဲ.ကြီး၏ဗမာပြည်ဆိုင်မူဝါဒအပြောင်းအလဲဟာအန္တရာယ်ရှိပြီးနိုင်ငံ၏ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာေ၇ာက်တယ်လို.ဝေဖန်လိုက်ပါသည်၊အိုင်စီဂျီရဲ.ဗမာပြည်ထိတွေ.ဆက်ဆံမူအားပေးသည့်ပေါ်လစီဟာလက်တွေ.ဖြစ်ရပ်မှန်နဲ.နိုင်ငံတကာစံနှုန်းစံချိန်းနဲ.ညီသည့်ဥပဒေနဲ.ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလို.ဝေဖန်လိုက်ပါသည်၊ဗမာပြည်ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာစစ်တပ်ကိုလုံးဝအကာအကွယ်ပေးထားပြီးအရပ်သားအစိုးပေါ်လာတာတောင်မှစစ်တပ်ကအပြစ်ကျုးလွန်မှုများကိုဘယ်လိုနည်းနဲ.မှအရေးယူလို.မရအောင်လုပ်ထားတယ်လို.တင်ပြထားပါသည်၊ဒါကြောင့်၊အိုင်စီဂျီကိုဝိုင်းဝန်ကန်.ကွက်စာရေသားကြပါရန်တိုက်တွန်းထားပါသည်၊ဂျီဂျေးစီအဖွဲ.ဟာသေသေချာချာလေ့လာထားပြီးမှအချက်အလက်များတင်ပြထားသည့်အတွက်ကြောင့်မှန်ကန်မှုရှိနေသည်၊ကမ္ဘာ.ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုအဖွဲ.ကြီးကိုထောက်ခံအားပေကြရန်တိုင်းရင်းသားအသံမှတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။အိုင်စီဂျီကိုစာရေသားကန်.ကွက်ကြနိုင်ရန်အောက်ပါအတိုင်စာရေးသားပေးပို.ကြပါ။ လေ့လာနိုင်ရန်၊http://www.globaljusticecenter.net/news-events/news/2011/ICGLetter.html
Chair Crisis Group:
Vice Chairman Hills & Company
1120 Twentieth Street, NW Suite 200 North, North Building
President and CEO Crisis Group Board of Trustees
PO Box 4435 Rivonia 2128
Mr. Yoichi Funabashi
Chief Diplomatic Correspondent and
Tokyo 104-8011 Japan
CEO Fiore Capital Corporation
595 Burrard Street, PO Box 49139
27 Rue Saint-Guillaume Cedex 07
Helsinki University Georgsgatan 29 A 3
GJC Challenges ICG Policy on Burma as Dangerous and in Violation of the Law of Nations
The Global Justice Center wrotealetter to the members of the board of the International Crisis Group (the "ICG") urging them to join with other board members to immediately revoke the ICG's longstanding policy of supporting unconditional engagement with Burma's military rulers.
ICG's Burma policy, encouraging "the West robustly engage the new Myanmar government at the highest levels," ignores both "on the ground facts" and peremptory norms of international law. The ICG fails to acknowledge that "the new Myanmar government" is illegal because it is based onaconstitution mandatingabifurcated sovereignty,afundamental breach of the law of nations. The constitution divides up sovereign powers and guarantees the military complete legal autonomy over all civilian and criminal military affairs. This renders the state of Burma without the legal capacity to enforce any international or domestic laws against the military, including U.N. Security Council Resolutions, the Nuclear Non-Proliferation Treaty, and the Genocide and Geneva Conventions.
ကေအန်ယူ ဦးစီးချုပ် ရုံးထံသို့ နအဖတပ်များ ချဉ်းကပ်